थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं : सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– ‘अब संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन’
विज्ञहरुको सुझाव– ‘संक्रमण नै घटाउनुको विकल्प छैन’
वैशाख १८, २०७८ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — वीर अस्पतालमा एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा बिहीबार रेनुका केसी आचार्यलाई कोरोना संक्रमण रहेको पत्ता लाग्यो । शल्यक्रियालगत्तै उनलाई कोभिड वार्डमा भर्ना गरियो । तर २४ घण्टा बित्दा पनि कुनै चिकित्सकले खोजखबर गरेनन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जारी गरेको अपिलमा संक्रमण रोकथामका लागि सबैलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । कुनै पनि मार्गबाट देशविदेश जानेआउने वा आन्तरिक/बाह्य पर्यटनका लागि कहींकतै जाने काम पूर्ण रूपमा नगर्न/नगराउन पनि अपिल गरिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा नजान र भीडभाड नगर्न पनि भनिएको छ । ‘देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबै जना संवेदनशील बनिदिनुहुन अनुरोध छ,’ अपिलमा भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले जारी गरेका निर्देशन तथा आदेशको पालना सर्वसाधारणले नगरेकै कारण यो अवस्था आएको बताए । ‘यो अवस्था आयो भन्नु हाम्रो बाध्यता हो । हामीसँग अब धेरै विकल्प बाँकी छैन,’ उनले भने । ‘अब पनि लकडाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने झनै भयावह अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७८ ०६:२६